Musharaxiintii hore ee doorashada J/land oo culays siyaasadeed dareemaya (Warbixin) - Muqdisho Online
Home Wararka Musharaxiintii hore ee doorashada J/land oo culays siyaasadeed dareemaya (Warbixin)
Musharaxiintii hore ee doorashada J/land oo culays siyaasadeed dareemaya (Warbixin)
Dooorashada Jubbaland ayaa gashay wajigii ugu danbeeyay kadib markii xalay Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Jubbaland iyo Odoyashada Dhaqanka ay si wadajir ah ugu dhawaaqeen liiska xubnaha xildhibaanada cusub ee barlamaanka Jubbaland oo ka koobanaan doono 7 xubnood. Talaabadan ayaa waxaa ay culays siyaasadeed oo hor leh saartay musharaxiintii hore ee diiday in ay isdiiwaan galiyaan.
Liiska xalay la soo saaray ayaa waxa aqriyay gudoomiye ku xigeenka Gudiga Doorashada Jubbaland taas oo meesha ka saartay khilaaf ay rajaynaayeen musharaxiintii hore in uu kala qaybiyo gudiga doorashada. Sida MOL loo xaqiijiyay saakay beesha Caalaamka iyo AMISOM ayaa ku qanacsan liiska xalay lagu dhawaaqay.
Musharaxiintii hore oo ka biyo diiday liiska xalay la soo saaray ayaa ayagana liis been abuura soo saaray kaas oo ay ku qoranan yihiin dad intooda badan dal ka maqan. Liiskaan ayaa la doonayaa in looga abuuro degaanka Jubbaland qalqal siyaasadeed.
Musharaxiintii hore ayaa waxa haysta cadaadis siyaasadeed kaas oo ah in ay ka tanaasulaan doorashada ama ay abuuraan carqalad siyaasadeed iyo amni oo ku qasbi doonta ciidanka amaanka ee Jubbaland in ay tilaabo ka qaadaan musharaxiintaas.
Dhanka kale musharaxiintaan ayaa waxa culays ugaga yimid dhanka Villa Soomaaliya oo dhaqaale badan ku bixisay doorashadooda, culayskaas ayaa uu ku qasbayaa kooxdaaan in ay abuuraan jawi qalqal galiya Amniga Jubbaland si Farmaajo u qanco.
Sidii MOL shalay idinkuugu soo tabisay Xasan Kheyre ayaa dhankiisa wadahadal gaar ah oo isaga kaligii u ah la furaty Axmad Madoobe , talabadaas ayaa gadaal ka toogatay da’daalka musharaxiinta Villa Soomaaliya oo rumaysnaa in Villa Soomaaliya oo wada socoto ay si buuxda u taageeri doonaan musharaxiinta aan isdiiwaan galin.
Su’aalaha la isla dhexmarayo saakay magaalada Kismaanyo ayaa ah ilaa intee ayaa Dowlad Goboleedka Jubbaland u dulqaadan doontaa Musharaxiinta aan isdiiwan galin oo ku fashilmay qorshihii ay doonayeen ay kula wareegaan xukunka Jubbaland.
Previous articleGo’aanka Maxkamadda ee Kenya & Somalia waa qasab in uu hirgalaa (Daawo)
Next articleXildhibaanadii ugu badnaa ee ka socda BFS oo tagaya Kismaanyo
Wasiirku xigeenka wasaarada Caafimaadka oo maanta Muqdisho lagu rasaaseyay
Wararka Safia Ali Yasin - January 21, 2020
Xaalada dhib u dhisada Galmudug oo caawa gashay xaalad adag oo cusub taas oo keeni doonta in mar kale lagu kala tago Galmudug. Go’aankii...
Wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliya Maxamed Siid Cabdullaahi ayaa maanta lagu rasaaseeyay degmada Boodheere ee gobalka Banaadir, gaar ahaan bar kontarool oo ay ku sugnaayeen...